Nancy Langston, Teto Toamasina
Manampahaizana amin’ny ady famotsim-bola
Nivahiny teto amin’ny fahapalalam-baovao ny onjam-peo ny radio vohanio i Rtoa Nancy Langston izay efa procureur teo aloha teo amin’ny departemanta amerikanina, talohan’ny naha procureur azy dia efa nisahana ny asa fanaovan-gazety tamin’ny BBC ihany koa. Ankoatra ireo voalaza teo dia manampahaizana manokana momba ny ady amin’ny famotsiam-bola ihany koa ny tenany.
Nambarany fa ny atao hoe famotsim-bola dia vola maloto avadika vola madio, mba hanadiovana ilay vola dia tsy maitsy manorina orin’asa ilay olona manao famotsim-bola eo ihany koa ny famoronan’izy ireo ny fiaraha-miasa amin’ny mpahay lalana sy ireo olona tompon’andraikitra amin’ny fandoavan-ketra eo ihany koa ny olona manampahaizana manokana eo amin’ny sehatry ny fitantanam-bola satria ny tanjon’izy ireo ny hampisy elanelana lavitra eo amin’ilay vola maloto avadika ho vola madio. Ohatra amin’izany ny vola azo avy amin’ny fivarotana zava-mahadomelona toy ny rongony eo ihany koa ny vola azo avy amin’ny kolikoly, isan’izany ihany koa ny vola azo avy amin’ny fanondranana olona.
Manoloana ireo dia misy ny rafitra toy ny SAMIFINE io rafitra io kosa indray no maiara-miasa amin’ny Polisy ary ny SAMIFINE no manoro ireo toromarika momba ny fanarahana ireo vola maloto. Araka ny nambaran’ity manampahaizana amin’ny famotsiam-bola ity dia tokony mandeha any amin’ny tahirim-bolam-panjakana avokoa ireo fananana na vola tratra.
Teo amin’ny sehatry ny asany amin’ny maha manampahaizana momba ny ady amin’ny famotsiam-bola kosa indray dia manampy ireo firenena ahitana izany ny ataon’izy ireo toy ny porofo hamantarana fa manao famotsiambola ny mpitondra fanjakana iray na olon-tsotra na mpiasam-panjakana io. Araka ny nambarany mantsy fa matetika ireo mpamotsy vola toy ireo mpitondra fanjakana voavidim-bola no mividy fitaovampiadiana, mividy Yote, mividy trano ivelan’ny firenena misy azy.
Nambaran’ i Rtoa Nancy Langston tamin’ny fivahiniany teto amin’ny onjam-peon’ny Radio Voanio fa mpitondra fanjakana na mpiasampanjakana manao kolikoly dia voavidim-bola.
(125) Prud'Homme : 25-05-2016 - 09:22